Izixhobo zeoyile, Umatshini wokushicilela ioyile, Umthengisi weoyile-uHuipin
I-HP120 encinci yokuCofa iioyile eziPhezulu
Abathengi kunye nomgangatho bahlala bengabokuqala
Singumvelisi oqeqeshiweyo. Uneminyaka engama-40 yokuthengisa kunye namava obuchwephesha
Singamashishini amakhulu okusanhlamvu kunye neoyile egxila kuphando lwezesayensi, uyilo, imveliso, ukuthengisa kunye nofakelo lobunjineli.
"Huipin" inkonzo yeshumi: inkonzo epheleleyo kunye negcwele kubathengi!
U-Hebei Huipin Machinery Co., Ltd.yinkampani enkulu yezixhobo eziziinkozo neoyile ezizodwa kuphando lwenzululwazi, uyilo, imveliso, ukuthengisa kunye nokufakwa kweprojekthi. Amashishini aphantsi abandakanya iDingzhou Yongsheng Grain kunye neoyile yoomatshini Co, Ltd. kunye neWanli Grain kunye neoyile yoomatshini Co, Ltd.
Emva kweminyaka engaphezu kwama-40 yophuhliso, inkampani ngoku unesiseko imveliso imveliso grease-class lokuqala, igcisa iinjineli zobugcisa igrisi kunye neengcali, kwakunye nobuchwepheshe imveliso phambili kunye nezixhobo ngqo. Zonke izixhobo zegrisi kunye nezixhobo ziveliswa ngokuzimeleyo.
Umasifundisane wokuLungiselela ioyile yemifuno
ICandelo lokuCoca ioyile engenasici
I-100TPD yeMbewu yokuCoca ioyile
Umgca wokuCoca ioyile engenasici
I-20 yeetoni eziThengisiweyo zoMatshini weNdaba
Umgca we-120TPD weSunflower Line
Umgca we-200TPD oLungisiweyo wokuLungiselela
I-500TPD yeCanola yeMbewu yokuLungiselela iMbewu
I-150TPD Iworkshop yokucinezela ioyile
Iitoni ezingama-70 zeMbewu yoPapasho lweMbewu yemostade
Umgca wokucoca ioyile ye-30TPD
Iitoni ezili-100 zembewu yokucinezelwa kwemveliso yangaphambili
Iitoni ezingama-200 zeProjekthi yokucinezela iJerm
Iworkshop yoCinezelo lwe-Groundnut ye-250TPD
I-500TPD yeOlseseed Solvent extraction Workshop
Imifuno yokuFikelela kwioyile
I-Crude Oil Full Plant yokuCoca okuPheleleyo
Izixhobo zethu zokuvelisa ioyile zithengiswa ekhaya nakumazwe aphesheya,
intengiso yethu ephambili yi-Asia eseMbindi, mpuma Asia, Afrika, Mzantsi Melika njalo njalo.
Kukangaphi izinto zokucinezela ze-screw zisuswa?
Abathengi abaninzi baya kubuza ukuba zingaphi izihlandlo zokutshintsha izixhobo zesikrufu xa bathenga? Kubonakala ngathi ingqalelo yomsebenzisi kule ngxaki iphezulu kakhulu. Namhlanje, o ...
Ulwazi ngeoyile yokutya
Ukusetyenziswa kweoyile 1. Yitya. Sesinye sezona zondlo zintathu ziphambili (iicarbohydrate, iprotein kunye neoyile) ekufuneka umzimba womntu ungasweli. Ukusetyenziswa yenye yeempawu zomgangatho wokuphila. T ...
Zininzi iindlela ezahlukeneyo zokufumana ioyile yemifuno. Umzekelo wendlela yokucinezela yomzimba, indlela yokucinezela ngesanti kubunzulu baphantsi, indlela yokusombulula isinyibilikisi njalo njalo. Iqhosha lemenyu
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Zonke iiMveliso Isigqibo seCentrifuge, Umatshini weoyile, Isikali seentshulube somatshini wokushicilela weoyile, Umthengisi weoyile wamva nje, Ukutya Ioyile esulungekileyo Umatshini, Imithombo yeendaba yeoyile yeOlive,